Mana Oromoo Swiss: Haqaan waan hin qabne Iyyaan hin argatan!!!
Galatoomi, gaanii kee blisumaaaa haa ta'u. Bulii dagaagi ammallee. Gurri kee ammoo aaga haa dhaga'u, qooqaa kee bareedaa kanaaf.
dragging oromo struggle to such level is unforgiable and histroy will remember as a traitors of the century.Obbo Dawud you sold oromia and with everything in it.Obbo Dawud you dragged our just a cause in which millions of oromian pershid for it.you are the most traitor i ever seen.you are million times worse than Gobana Dacee.You are one stubborn man and you are clearly a dictator.you shown us you are power monger not librator.Here I'm asking you to resign from your duty for the sake oromoos.If not you are totally. responsible
Yaa jarana, isin taa'aa wal faarssaa. Mee waa tokko sin haagaafadhu obboo Olumaa. ABO qabeenya Wallaggaa taasise? Moo yoo ABOn kan namoota Wallaggaan hingeggeeffamnne ta'e ABO biraa ijaarrachuuf iyyuu qabddu? Mee yaa dhiiroo, ABO halkanii guyyaa balaaleffachuu dhiisaa diinarratti bobba'uu yaalaa. Kan akka keessan hujii hiiketu taa'ee "QC, Shanee Gumii, ..." jechaa xeebaa oola malee amantanis amanuu baattanis yeroo ammaa uummanni oromoo ABO tokko duwwaa beeka. ABO isa qabsaawaa jiru, ABO isa bilisummaa uummataaf falmataa jiru, ABO isa WBO ijaarratee falmataa jiru! Maal jettu laata?
ABOn Jaarmaa uummata Oromooti malee kan murna Amaara farduun Amaara jala deemanii ta'uu hin danda'u. ABOn kaayyoo isaatu ABO isa godha malee maqaa isaan of yaamuun ABO murna takko hin gochisiisu. Egaa munrni shanee-Qinjit hardha Ethiopiyaa demokratessuuf iyyaa maqaa kanaan of yaamuu tasa hin qabu. Kanaaf ABOn jaarmaa bilsummaa Oromiyaatiif loluu qofa. Murni shanee-Qinijit gantuu jedhamuu malee ABO jedhamuu hin dandeessu.
Namoonnii yakkamoon nama yakkuuf yoo yaalan arguun Ajaa'iba. Nama seeraati kan ofiin jedhanii guddaa of fakkeessan hoggantoonni shanee gumii tokko tokko, dhuunfaa isaaniittillee waayee seeraa wallaaluun yoo isaan jireenya dhuunfaa isaaniitillee seeraan qajeelchachuu dadhabanii nyakka keessa seenan ragaan muldhisuun ni danda'ama. Egaa namoonni jireenya dhuunfaa isaaniillee hogganachuu hin dandeenye waayee sabaa irratti Seera beekna jechuun yoo xibaaruuf yaalan duubni isaanii qaanii akka ta'u namuu hubachuu qaba.
Injifanoon ka uummata Oromooti!